सोलुखुम्बुमा ब्याटमिन्टन – जित क–कस्को पोल्टामा ? – Himal FM 90.2 MHz
सोलुखुम्बुमा ब्याटमिन्टन – जित क–कस्को पोल्टामा ?
खेलकुद adminhimal June 18, 2018
सोलुखुम्बु, ४ असार
सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा जारी खुल्ला व्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला ब्याटमिन्टन संघ सोलुखुम्बुको आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगीताको पुरुष डवलतर्फ सोलुखुम्बु फाउण्डेशनका ईन्द्र मेहता र हिरा राई प्रथम लुक्लाका लाक्पा तामाङ र दावा ग्याल्जेन शेर्पा तथा विपिन खालिङ र दल बहादुर पौडेल तृतीय भएका छन् ।
पुरुष सिङ्गलतर्फ ईन्द्र मेहताले प्रथम स्थान हासील गरेका छन् भने हिरा राई द्धितीय भएका छन् । तृतीय स्थानमा नेपाने युवा क्लवका प्रियाङसु क्षेत्री र पेम्बा शेर्पाले जित दर्ता गारएका छन ।
१६ वर्ष मुनिका पुरुषतर्फ पेम्बा शेर्पा प्रथम, प्रियाङ्सु क्षेत्री द्धितीय र आशिष खनाल तथा जेनिस जंग कार्कीले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरि, ४५ देखि माथि उमेर समुहका पुरुष डवल खेलमा कर्ण थापा र पुर्ण बहादुर चित्रकार ललितपुर प्रथम भएका छन् भने सुमन महर्जन र अशोक श्रेष्ठ ललितपुर द्धितिय र राजकुमार गुरुङ र किरण राणा तथा चन्द्र लिम्बु र छिरीङ लामा काठमाण्डौले तृतीय स्थान हासिल गरेका छन् ।
प्रतियोगीतामा शिर्ष स्थान हासिल गर्नेलाई १५ हजार, १० हजार र ५ हजारको साथमा ट्रफि, मेडल र प्रमाण पत्र वितरण गरिएको छ । पु्रस्कार जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका संयोजक वीर कुमार राईले वितरण गर्नुभएको हो ।
महाकुलुङमा एक्सरेसहितको स्वास्थ्य शिविर शुरु
खुम्बुको जनजीवन : हिउँ पगालेर पानी
ठेकेदारको लापारबाहीले उदयपुरको लिम्चुङबुङमा विद्युत विस्तारको काम अलपत्र